BUG တွေကို FIX ဖို့ကိုဘယ်လို PHYSXCUDART_20.DLL - ဆောင်းပါးများ - 2019
သင်သည်မည်သည့်ဂိမ်းကို run ပါလျှင် (အတိတ်ကာလကနေ - က Borderlands) အမှားအစီအစဉ်ကိုမစတင်နိုင်မအသိပေး, ပေါ်လာတဲ့ကွန်ပျူတာအလိုရှိသောမဟုတ်သည်ကို ထောက်. , ဘယ်မှာ physxcudart_20.dll ကို download လုပ်ပါရန်, မရှာပါဘူး, အမှားအများကြီးလွယ်ကူသည်ကို fix ။
physxcudart_20.dll ဖိုင် Nvidia PhysX နှင့်အတူမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာကအမှား physxloader.dll ပြင်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်, ကဲ့သို့), ထို PhysX အမှားတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်ကိုဆုံးမပေးပါ။ ဆိုဒ်များ-collection များကို DLL ကိုစာကြည့်တိုက်၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများမှဒီဖိုင်ကို Download လုပ် - လည်းမကောင်းတဲ့ option ကိုပြုလုပ်သင်ကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူအန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
သင်ကစားပွဲကိုစတငျသညျ့အခါတစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးပြင်ဆင်ချက် physxcudart_20.dll အမှား
ဒါဟာအမှားကြောင့်ငါတို့မြင်သောကြောင့်, တချို့အကြောင်းပြချက် borderlands.exe (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအခြားဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ပျက်), ဂိမ်းနှင့်အတူ folder ထဲမှာဖြစ်သည့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်အစား physxcudart_20.dll cudart.dll download, ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖြစ်ပေါ် အဘယ်သူမျှမ physxcudart.dll ရှိကွောငျးသတငျးနှငျ့စနစ်တစ်ခုအမှား။
ဒီအမှား fix ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်း folder ထဲမှာ get (သင်ပြဝှက်ထားသော system files ကိုဖွင့်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ) file cudart.dll, တူညီတဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာတစ်ဦးမိတ္တူစေနှင့် physxcudart_20.dll ဖို့မိတ္တူကိုအမည်ပြောင်း, ထို့နောက် Borderlands အစီရင်ခံစာများမပါဘဲစတင်သင့် အမှား။
အထက်ပါအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည် Nvidia PhysX (ကိုလည်းဂိမ်းလို) installed ကြပြီမဟုတ်။ ဤအချက်မှာတရားဝင် website ကနေနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါအချိန်အတွက်ကဒီမှာ: //www.nvidia.ru/object/physx-9.13.0725-driver-ru.html (သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်, ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် nvidia.ru PhysX ကိုရှာဖွေသည် သာ. ကောင်း၏ အဖြစ်ကောင်းစွာ updated version ကိုကဲ့သို့) ။
ဗီဒီယို Watch: Como Resolver TODOS ERROS de DLL do seu PC Windows (အောက်တိုဘာလ 2019).